Yakaomeswa Mapureti Mapedhi, Dhaimondi Chombo, Daimondi Kukuya - Bontai
Isu tinogara tichitevedzera bhizinesi uzivi hwe "zvigadzirwa zvakanaka, kukuya kwakanaka, uye kwakadzika sevhisi kugona".
Nemi ZVENYU ZVESE NZIRA.
2021 latest design 3, yakaoma kushandiswa nedhaimani pol ...
7 padiki Double Row Diamond vachikuya Cup Wheels add ...
4, Snail-zvechizarira Diamond Edge vachikuya Wheel ...
3, nebwe mangoda makorari ikanyanya mvura nyoro Polish ...
3 padiki unopinza yakaoma nedhaimani makorari Pucks kuti Co ...
4, Resin Diamond makorari Mapedhi nokuti Klind ...
Fuzhou Bontai Diamond Tools Co., Ltd hwakagadzwa muna 2010, kuva pachake mugadziri iyo kushandisa kutengesa, kusimukira uye kugadzira mhando dzose nedhaimani Ezvemutauro. Isu tine akasiyana madhaimani ekugeda uye kupukuta maturusi epasi polish system, tichiisa shangu dzedhaimani yekukuya, madhayamondi ekugaya makapu mavhiri, madhaimani ekugaya ma disc uye zvishandiso zvePCD. Kuti ishandiswe pakukuya zvakasiyana-siyana zvekongiri, terazzo, uriri hwematombo nedzimwe nzvimbo dzekuvaka.
How kusarudza kongiri vachikuya mukombe mavhiri
Kubvumbi / 01/2021
1. Simbisa hupamhi hukuru hwakanyanya kuwanda kwevanoshandisa vatengi ndeye 4 is, 5 ″, 7 ″, asi iwe unogona zvakare kuona vanhu vashoma vachishandisa 4.5 ″, 9 ″, 10 ″ nezvimwe zvisikwa zvisina kujairika. Iyo inoenderana nezvako zvemunhu zvaunoda uye iyo kona yekugaya yaunoshandisa. 2. Simbisa zvisungo Kazhinji ...
Concrete makorari bvunzo mhenyu kuratidza
Nhasi tine kongiri yekukorobha bvunzo mhenyu show, isu tinonyanya kuenzanisa kupenya kwe3 - gumi nemaviri chikamu chekupurinda pad uye 3-torx polishing pad. Ichi chikamu chegumi nemaviri kusvika gumi nemaviri polishing pad, ukobvu hwacho ndi12mm, inokodzera kongiri yakaoma uye yepurazzo pasi. Grits 50 # ...
Resin chisungo nedhaimani makorari mapedhi
Resin chisungo nedhaimani makorari mapedhi ndeimwe yezvigadzirwa zvedu zvikuru, tanga tiri mune ino indasitiri kweanopfuura makore gumi. Resin bond polishing mapedhi anoitwa nekusanganisa uye jekiseni dhayamondi poda, resin, uye mafiringi uyezve inopisa-yakatsindirwa pane inosemesa mishini, uyezve kutonhora uye demolding kune ye ...
Mhoroi, munhu wese, heino Fuzhou Bontai Diamond Zvishandiso Co; Ltd muChina, nyanzvi yedhaimani maturusi ekugadzira ane anopfuura makore makumi matatu ezviitiko. Zvakanaka kucherechedza kuti tichava nemutambo wekuratidzira papuratifomu yeAlibaba musi wa9, Kurume (Beijing Nguva), ichi ndicho chiratidzo chekutanga chehupenyu chatinobata mushure mekunge tiri b ...
Bontai Daimondi Kukuya Zvikamu
Ndira / 08/2021
Diamond kukuya chidimbu kunogara kuchidudzirwa sedhaimani kukuya shangu nevanhu vazhinji. Kana iwe uchida dhayamondi yekukuya shangu, ndapota tinya www.bontai-diamond.com Pano isu tinonyanya kutsanangura chishandiso chekongiri chinonzi chidimbu chedhaimondi yekukuya, sekongiri yekugaya yedhaimani chidimbu, machena, granite uye ...